Understanding the resilience of coral in Tobago | Reef Resilience
Fahatakarana ny faharetan'ny vatohara any Tobago
Apr 18, 2014 | Vaovao
Jahson Berhane Alemu I (mpandray anjara tamin'ny fanofanana 2010 Training Training Workshop) sy ny mpiara-dia Ysharda Clement vao haingana namoaka ilay gazety "Mass Coral Bleaching ao amin'ny 2012 any Karaiba Atsimo". Nandritra ny 6 volana dia nanara-maso zanatany 650 teo ho eo izy ireo (voaforona taxa 30) tao amin'ny tranokala telo manerana an'i Tobago nandritra ny hetsika fotsifotsy natao tamin'ny 2010. Ny tanjon'ny fikarohana nataon'izy ireo dia ny fitadiavana teboka fiaretana haran-dranomasina any Tobago amin'ny alàlan'ny famantarana ireo taksiosy mahazaka famotsiana. Nanontany an'i Jahson bebe kokoa izahay momba ny fikarohana nataony. Manokana izahay te hahafantatra ny fomba hahafahan'ny mpitantana ny haran-dranomasina hianatra avy amin'ny zavatra niainany. Ity no nolazainy:
Ahoana araka ny eritreritrao no hitarika ny fitantanana ny haran-dranomasina any Tobago ny zavatra hitanao?
Ny valim-pikarohanay izao dia mandray anjara amin'ny fototra miorina amin'ny porofo, izay ahafahan'ny mpitantana ny haran-dranomasina mandray fanapahan-kevitra tsara. Ny voka-pikarohanay dia nampidirina anaty drafitra valin'ny Bleaching, izay nampidirina amina taksi mba hamaritana ny fiantraikan'ny famafana sy ny fiantraikan'ny anthropogenika hafa amin'ny fahasalaman'ny vatohara.
Inona no tena nahagaga anao nandritra ny fikarohana nataonao?
Ny karazana valinteny rehetra momba ny taxa amin'ny fanantenana mitovy. Ho fanadihadiana amin'ny ho avy izany.
Inona no torohevitra anananao amin'ny mpitantsoratry ny haran-dranomasina sy ny mpitsabo izay miezaka mamantatra ny haran-dranomasina?
Ny faharetan'ny vatohara dia midika zavatra marobe ary mivoatra izy io. Ny hevitro dia tsy ho hitanao ao anatin'ny tombana iray izany. (Eny, azonao atao angamba, ary mirary soa ho anao!) Saingy tsy manam-pahaizana aho ary vao nanomboka. Ho ahy, ny fananako fahatakarana mazava manokana ny dikan'izany sy ny fomba nikasa hampihatra an'io fahalalana io ohatra amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny drafitra valiny sy ny fisafidianana MPA no ivon'ny fomba fiasa. Ity fandinihana ity dia iray monja amin'ireo eo an-dàlam-pamantarana marobe mba hahafantarana tsara kokoa ny fiakaran'ny haran-dranomasina sy ny hoavin'ny haran-dranomasina any Tobago.